Bambalwa abantu bazi ukuthi lo mdlalo yasungulwa ngo bakithi ngo-1989, lapho ithelevishini isanda a ethandwa kakhulu TV uchungechunge oluthi "ingwane." Ubuqambi Namanje bebaphikisana ngani yangaphambili MSU iziqu ezimbili, okuthi njengombuso abafundi futhi omakhelwane egumbini dorm, wasungula umdlalo usebenzisa sidlala amakhadi. Namuhla, lo mdlalo uye waba adume, futhi abaningi banesithakazelo umbuzo kanjani ukudlala "Mafia". Nokho, namuhla thina wakhuluma lokhu watshela.
Imithetho "mafia": incazelo emfushane
Ukubamba iqhaza ku-ekuholeni game esivaliwe osebenzelana amakhadi. Uma efika umbala obomvu, wena-ke kukhona "ethembekile", "sokuya empini" lapho abamnyama - "mafia".
Action game sehlukaniswe nezikhathi ezimbili - i-"ebusuku" futhi "usuku". Phakathi ukuqala ebomvu abanikazi ikhadi lokuqala ebusuku ashalazele, "ukulala" futhi "Mafia 'amalungu sibheke nomunye, ukukhumbula comrades, okungukuthi" ajwayelekile ".
Bese kufika 'Luwusuku' lapho bonke abadlali ukuvula amehlo abo futhi zama ukubona ukuthi yimaphi wabo "mafia" futhi umuntu kufanele "ukubulala". Njengoba "mafia" sazana mathupha, yena onesithakazelo eqinisweni ukuthi choice bawa omunye "ngokuthula." Kukhethwa umuntu candidacy isekelwa agumenti ngamazwi. Labo uvotela ngaphezu kwesigamu ababambiqhaza, vula imephu uphinde bungaveli umdlalo.
Nge ukuqala "ebusuku" elandelayo "mafia" Okukhethwayo (ufakazelwe yilabo abazibiza ikhanda, ukuthinta, kuhlangana kwemehlo), oba isisulu. "Usuku" kuthiwa igama lomufi ehamba phambili, kodwa ikhadi kwakhe akuzange kudalulwe.
Emva "ebusuku" olandelayo 'ukusa' oluyophela "Mafia" futhi "izakhamuzi 'kufanele sakhe phezu kwamehlo akho. Ivula amehlo akho kuphela "UKhomishana" (obambe iqhaza ne red suit ikhadi ethize), ukhetha omunye wabadlali futhi ngosizo ukuthinta uthola kusukela phambili, ngubani lo muntu. Okutholakele commissar isebenzisa "usuku" ukuze bakwazi ukuqinisekisa abanye iyathinteka, noma, Ngakolunye uhlangothi, azisetshenziswa umdlali.
Idlalwa kanjani i-"mafia": Ekupheleni umdlalo
Ukuphela fun iza lapho "izakhamuzi 'ekwazile ukubulala wonke amalungu" Mafia "noma, Ngakolunye uhlangothi, lapho" mafia "incapacitate zonke" ngokuthula. "
Idlalwa kanjani i-"mafia": inombolo yabadlali
Ngokuvamile kucatshangwa ukuthi okungcono, uma ukuzijabulisa ehilelekile abantu 11-15 (uphendulela 4-6 imizuliswano yomdlalo ngesisekelo emini noma ebusuku - omunye round). Kuyinto efiselekayo anenombolo obungavamile abantu ukugwema ezinye izinkinga ne ukulingana wamavoti.
Isilinganiso "mafia" futhi "izakhamuzi 'ezingafanele. imibala Black and red kungenzeka lemali okungenani zilingana (kubhekwe isimo elikhulu, lapho umenzi inkulu ku eyodwa ukudlula yokugcina). It kungenziwa ukuze "mafia" wayedabuka ukuba okuningi ngesibalo ngaphandle "ngokuthula" - ke umdlalo kuyoba nzima kakhulu, ngakho-ke yaba yinhle.
Idlalwa kanjani i-"mafia": okushiwo ukuzijabulisa
Fun siqukethe eziyisisekelo izingxenye ezimbili semantic: Mathematical nezingokwengqondo. Esokuqala siwukuthi ngamunye "usuku" abahlanganyeli kudingeka sikhumbule abavowudele bani, ngalokho okwashukumisa abazikhethayo ngubani ekugcineni kwahlaluka ukuthi kukhethwe - "Ukuthula" noma "mafia". Uma ukubala ngokucophelela zonke, kuyoba lula ukubona ukuthi obani ihlala ngekhadi omnyama - ke kuyoba nguwe obangela "ukubulala" ka ivoti eziqotho zivamile.
Ngokomqondo njengoba okusho ukuthi abahlanganyeli kudingeka bakhethe amanye amakhono oyibamba, bokukhuluma, ukuze bakwazi bakwazi ukuqinisekisa abanye wokuzwana zabo kuze kube "izakhamuzi 'kunokuba umuntu" mafia. "
Idlalwa kanjani umdlalo "Mafia ': indawo kumnandi
Inketho engcono kakhulu egumbini lapho abahlanganyeli angazamukela ipherimitha (phansi, ku SOFAS, izihlalo, armchairs, njll). Njengoba umkhuba ubonisa, umdlalo omkhulu eligoqiwe futhi endaweni evulekile (epaki, ogwini), kanye egunjini isitimela nezitimela imoto. Ngemva deal, wonke umuntu kufanele ufunde ngokucophelela ikhadi lakho, bese ulifihle (isibonelo, ukususa ephaketheni lakho) bese kuphela lapho lophakanyisiwe yayo izokhetheka ephepheni lokuvota.
Feliks Zemdegs: vunderkid noma amacebo?
Lapho umgwaqo i-izingcezu chess imithetho ebhodi kanye umdlalo
Ukukalwa imidlalo ibhodi wonke umndeni
Cafe "Inkinga yokungabi uhlobo" - ukusungulwa ethokomele
Izibikezelo zimfushane futhi ezihlekisayo bonke izikhathi
Gloxinia terry: ukunakekelwa, ukutshalwa, zizalela.
Umuntu owasungula le ndlela engalawuliwe of kwengqondo Breyer Yozef: Biography, imisebenzi kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Bob bob nge kwelulwa - hit isizini!
Boarding endlini "Petrel", Repino: izithombe kanye nokubuyekeza
Carpet wokuhlanza ekhaya. Safe futhi kulula.